भावी प्रधानमन्त्रीलाई सरस्वती सुब्बाको खुलापत्र « Pahilo News
भावी प्रधानमन्त्रीलाई सरस्वती सुब्बाको खुलापत्र
प्रकाशित मिति : 25 July, 2016 4:14 pm
१० साउन । सरस्वती सुब्बा सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएकाहरुका लागि परिचित नाम हो । भूमिअधिकारवादी नेता सुब्बाका स्वतन्त्र विश्लेषणको धेरै चर्चा हुने गर्छ । कुनै पार्टी विशेषको रंग लेपन गरेर भन्दा पनि जनपक्षीय आवाज उठाउने सुब्बाले ओली सरकार ढलेपछि र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत नयाँ सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई केही सुझाव दिएकी छिन् । उनले अब बन्ने प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सुझाव उनकै शब्दमाः
सरकार बन्नु र ढल्नु नेपालका लागि सामान्य भइसकेको छ तर सरकार ढल्नु या ढाल्नुपर्ने कारणहरु विचार गर्दा चाहिँ देशको भविष्य खतरामा छ भन्नपर्ने हुन्छ । ओली सरकार अजम्बरी थिएन र हुन पनि हुँदैन तर जे कारणले ढालियो, त्यो चिन्ता लाग्दो कुरा हो ।
नेपालमा राजनीतिकर्मीहरु विवेकले भन्दा आदेशले चल्छन् । यिनीहरु कसैको खेताला जस्ता लाग्छन् । एमाले माओवादी सरकार बने लगत्तै प्रचण्डले राष्ट्रियताका लागि साइकल चढ्छु भन्दा जनता खुसी भएका थिए । के अहिले प्रचण्डको साइकलको हावा फुस्किएको हो ? त्यो साइकल किन चलेन ? सँगै बसेका ओलीको साइकल चल्यो, प्रचण्डको किन चलेन ?
अबको प्रधानमन्त्रीले कसैको खराउको रुपमा काम गर्न हुन्न, स्वतन्त्र प्रधानमन्त्री बन्न पर्छ । निर्णय लिँदा देशबाहिरका ख्वामितहरुसँग सोध्न भएन । ख्वामितहरुको आदेश र इशारामा काम गर्न भएन । जे भए पनि अब नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ, सहज रुपमा अर्को सरकार बन्नुपर्छ, अर्को सरकार चल्नुपर्छ । नयाँ सरकार प्रचण्डको नेतृत्वमा बन्ने होला ।
उहाँको सरकारले बिना अवरोध काम गर्न पाउनुपर्छ । साइकलको फुस्किएको हावा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनेपछि भर्नुहोला । आग्रह छ– त्यो हावा नेपाली नै हुनुपर्छ, नेपालको मैदान, डाँडाकाँडा र हिमालको हावा हुनुपर्छ ।
अब सरकारमा जो पुगे पनि ओली सरकारको पालामा सुरु भएका केही काम अगाढि बढाइनुपर्छ । त्यो काम हो–
– चीनबाट पेट्रोलियम ल्याउने
– चीनसँग भएको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने
– उत्तरी नाकाहरु खोल्ने र त्यहाँसम्म पुग्ने सडकको स्तरोन्नति गर्ने
– काठमाडौं निजगढ फास्ट ट्रयाक नेपाली खर्चमा बनाउने
– सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न भूमि व्यवस्थापन युद्धस्तरमा गर्ने
यी काम नगर्ने सरकार टिक्न हुन्न, टिकेर पनि काम छैन । आशा गरौं– भावी सरकारबाट यी काम हुनेछ ।